Wararka - Hayso koox xoog badan oo iibinta kadib ah, qalab dheereynta qalabka muddada fog iyo dayactirka dalka oo dhan
Hayso koox xoog badan oo iibinta kadib ah, qalab-ka-hagaajinta muddada-dheer iyo dayactirka waddanka oo idil
[Sharaxaad kooban) Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacturing Co., Ltd. waxay ku taalaa koonfurta caasimada Beijing iyo waqooyiga Jinan. Waxay leedahay gaadiid biyo iyo dhul aad ugu habboon. Waa shirkad xirfadlayaal ah oo leh baaxad weyn oo soo saarista mashiinnada kartoonka iyo mishiinnada daabacaadda. Shirkaddu waxay leedahay qalab mashiinno dhameystiran, takhasus sare leh, khibrad wax soo saar hodan ah, awood farsamo oo xoog leh, hababka imtixaanka oo horumarsan, nidaamka maareynta oo dhameystiran, waxayna soo martay ISO9001: 2000 shahaadada nidaamka maareynta tayada caalamiga ah (lambarka diiwaangelinta: 03605Q10355ROS), Ma yahay xiddig soo kordheysa warshadaha mashiinada daabacan ee kartoonka dalkeyga. Wax soo saarka shirkadeena waxay leeyihiin moodooyin fara badan oo farsamo, qeexitaan dhameystiran, waana la kulmi karaa
Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacturing Co., Ltd. waxay ku taalaa koonfurta caasimada Beijing iyo waqooyiga Jinan, iyadoo leh biyo iyo dhul aad u haboon Waa shirkad xirfadlayaal ah oo leh baaxad weyn oo soo saarista mashiinnada kartoonka iyo mishiinnada daabacaadda. Shirkaddu waxay leedahay qalab mashiinno dhameystiran, takhasus sare leh, khibrad wax soo saar hodan ah, awood farsamo oo xoog leh, hababka imtixaanka oo horumarsan, nidaamka maareynta oo dhameystiran, waxayna soo martay ISO9001: 2000 shahaadada nidaamka maareynta tayada caalamiga ah (lambarka diiwaangelinta: 03605Q10355ROS), Ma yahay xiddig soo kordheysa warshadaha mashiinada daabacan ee kartoonka dalkeyga.
Wax soo saarkyagu waxay leeyihiin moodooyin fara badan oo farsamo iyo qeexitaanno dhammaystiran, oo buuxin kara shuruudaha isticmaalayaasha kala duwan. Ruuxa "Sii Hormarinta" iyo "Hogaaminta Sare", shirkadeena waxay si firfircoon kor ugu qaaddaa maareynta tayada dhameystiran. Wax soo saarka la soo saaray, sababtoo ah muuqaalkooda quruxda badan, farsamo adag oo farsamo leh, qiimo macquul ah iyo adeeg iib ka dib kaamil ah, ayaa waxaa si wanaagsan u soo dhoweeyay dadka isticmaala adduunka oo dhan sannado badan.
Shirkaddu waxay leedahay in ka badan 30 sano oo ah R&D iyo khibrad soo saar. Shirkaddu waxay u hoggaansameysay fikradda adeegga ee "tayada dammaanad qaadka, adeegga ujeeddadu tahay, iyo u habeynta macaamiisha", waxayna ku hawlan tahay teknoolojiyad casri ah, aqoon xirfadeed iyo maaraynta kumbuyuutar. R&D iyo soosaarida qalabka waxsoosaarka guddiga oo dhan. Iyada oo ku saleysan xaadirka ah, eegaya mustaqbalka, wajahaya baahida degdegga ah ee dib u habeynta mashiinada kartoonka hadda jira, waxaan si firfircoon ula shaqeyn doonaa xamaasad buuxda, xoojinta maaraynta gudaha, ballaarinta suuqa dibadda, kordhinta cilmi baarista sayniska, cilmi baarista iyo horumarinta noocyada wax soo saarka cusub. , iyo hagaajinta badeecadaha jira Waxqabadka kasta ee shirkaddu waxay ku dadaaleysaa inay ku siiso 100% nabadgelyo maskaxeed iyo 1,000 ku qanacsanaanta alaab tayo sare leh oo qiimo jaban iyo adeeg dhameystiran oo iibka kadib ah, runtiina xaqiiqsada xaaladdeena guul-guul!